“Slalom”: mitarika amin’ny filaharana ankapobeny i Tsiory | NewsMada
“Slalom”: mitarika amin’ny filaharana ankapobeny i Tsiory
Manana isa ambony i Tsiory, hatreto, rehefa natao ny tambatr’isa tamin’ireo dingana dimy efa vita amin’ny fiadiana ny tompondaka nasionaly 2018 amin’ny “Slalom”. Nivoaka, omaly, ny filaharana ankapobeny ary hita soritra sahady ireo kalaza amin’izao andro iray mialoha ny dingana fahenina izao.
Nisongadina hatrany i Tsiory ary saika azony avokoa ny amboara nandritra ny dingana rehetra nifanesy. Anisan’ny nahazoany izay vokatra tsara izay ka nibatany ny fandresena ny fifaninanana nokarakarain’ny TMF, ambaratonga voalohany, tamin’ny fifaninanam-pirenena “Slalom”. Isa 25 no teo am-pelatanany tamin’izany. Teo ihany koa ny “Slalom” nokarakarain’ny MSA sy FMMSAM, samy nanamarihany isa 25 avy ihany koa. Nilatsaka kely kosa ny laharany tamin’ny dingana faharoa sy fahatelo rehefa niady ny lohany tamin’i Hugo izy, nandritra izany. Isa 111, hatreto, ny azon’i Tsiory ary manana fanantenana ny handrombaka ny anaram-boninahitra mihitsy izy amin’ity taona ity.
Misimisy ihany ny elanelana eo amin’ity mpanamory kalaza ity raha oharina amin’ny laharana faharoa, i Faniry. Ity farany izay manana isa 59 raha toa ka 58 kosa ny an’i Mika rahalahiny.
Na eo aza ny fanananan’ireo mpanamory telo voalohany tombony amin’ny isa, maneho fahavononana avokoa ireo mpifaninana hafa rehetra hiatrika ny dingana faha-6 amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, “Slalom”, hotanterahina rahampitso asabotsy 10 novambra eny Ivato. Fifaninanana karakarain’ny Tac’s (Tamatave auto club sport) sy eo ambany fiahian’ny FSam (Fédération du sport automobile de Madagascar).